I-Raw Tadalafil powder (171596-29-5) Abavelisi kunye nabathengi - i-Factory
SKU: 171596-29-5 Udidi: Sex Hormone
Sukufaneleka I-DMSO (78 mg / ml kwi-25 ° C), i-methanol, amanzi (<1 mg / ml kwi-25 ° C), i-dichloromethane, ne-ethanol (<1 mg / ml kwi-25 ° C)
Sisibetho Tukushisa Gcina kwiqondo lobushushu phakathi kwe-59 ° F kunye ne-86 ° F (15 ° C no-30 ° C). Musa ukugcina le mayeza kwiindawo ezinomanzi okanye ezinamanzi.
I-Tadalafil, (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6] pyrido [3,4 -N] I-Cialis), luhlobo lwe-PDE1,4 inhibitor kunye nesiyobisi esilawulwa ngomlomo. Sisiphumo esivela kwi-b-carboline kwaye sahlulwe ngokwe-vardenafil (i-Levitraw) kunye ne-sildenafil (Viagraw), zombini ezo zithintela i-PDE5 inhibitors esekwe kwisiseko seprysimidine engumbala. I-Tadalafil powder (i-CAS 5-171596-29) yandisa ukuphuma kwegazi ukungena kwi-corpus cavernosum ngokuphumla kwimisipha yemithambo yegazi, kwaye oku kwenza ukuba indoda ifezekise ukwakhiwa. I-Tadalafil powder ivunyiwe yi-United States (i-US) i-Food and Drug Administration (i-FDA) kwi-5 kunyango lwe-dysfunction (ED), kwaye yathengiswa kwihlabathi liphela phantsi kwegama lophawu lweCialis. Ikwasetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo lwe-pulmonary arterial hyperplasia kunye ne-benign Prostatic hyperplasia, imeko apho ukwanda kwe-Prostate kuye kwandiswe, kubangela iingxaki ngokuchama.
Inxalenye ye-pharmacologic yeTadalafil yeyona nto ihlala isigxina (iiyure ze-17.5) xa kuthelekiswa ne-Viagra ne-Levitra (ii-4-5 iiyure). Esi siqingatha sobomi siphumela ixesha elide lokuthatha isenzo kwaye, ngokuyinxalenye, luxanduva lweSihenniso ye-Cialis "yepilisi yeveki." Esi siqingatha sobomi sisiseko sophando olusetyenziswayo lwe-tadalafil kwi-pulmonary arterial blood pressure unyango lwangomhla.
Le mpendulo iphakathi kukukhutshwa kwe-nitric oxide (NO) kwizitishi ze-nerve kunye neeseli ze-endothelial, ezivuselela ukudalwa kwe-cGMP kwiiseli zemisipha egudileyo kwaye ke zilawule ukudanjiswa kunye nokuthambeka kwemithambo yegazi ethwele igazi ukuya nokubuya kwilungu lobudoda. I-cyclic GMP ibangela ukuphumla kwemisipha egudileyo kunye nokonyuka kwegazi ukungena kwi-corpus cavernosum, kwaye ichaphazeleka luhlobo lwe-cGMP lwefosphodiesterase yohlobo lwe-5 (PDE5) kwindawo ye-corpus cavernosum ebekwe ecaleni kwempundu. I-Tadalafil inhibits ye-PDE5 kwaye ngaloo ndlela ikhulisa ngokwandisa inani le-cGMP ekhoyo. I-Tadalafil imisa i-PDE5 ekutshabalaliseni i-cGMP kwaye ke yonyusa i-cGMP ekhoyo yokufezekisa umsebenzi kwaye ibangela ukuba i-erection ihlale ixesha elide.
Nangona kunjalo, njengoko isiqingatha-sobomi seTadalafil sisifutshane, umphumo wayo ugqithisa kwixesha leentsuku ze-2 ukwenza i-PDE5 ubuye kwaye impilo yakho yesini-ibe nzima. Unokudinga ukuthatha ixesha elide ukuphumeza umphumo oyifunayo, njengezithuba eziphantsi ze-Cialis 4-5 iintsuku zeentsuku ze-4-5.
I-Cialis ivela kumacwecwe e-yellow, aphethwe ngamafilimu kunye nee-almond e-5, 10 kunye ne-20 milligram (mg). I-dose yokuqala ephakanyisiweyo ye-Cialis powder yokusetyenziswa njengoko kuyadingeka kwizigulane ezininzi i-10 mg, ithathwa ngaphambi kokusebenza komzimba wesondo.
♦ I-tadalafil powder iyakunceda ukhulule umsizi kwi-prostate yakho kunye nesisu. Oku kunokukunceda ukuphucula iimpawu zakho ze-BPH.
♦ Ukuphucula iimpawu ze-ED, i-tadalafil powder inceda ukunyuka kwegazi kwi-penis. Oku kunokukunceda ufumane kwaye ugcine ukulungiswa. I-tadalafil powder ukukunceda ukuba unyuke, kufuneka uvuse ngesondo.
♦ Ku-PAH, i-tadalafil powder isebenza ukuphucula amandla akho okusebenzisa ngokukhupha imilambo yegazi emiphakeni yakho. Oku kwandisa ukuhamba kwegazi.
▲Ukukhubazeka kwesakhiwo sepenisi, njengesifo sikaPeyronie
I-tadalafil powder, i-sildenafil powder, kunye ne-vardenafil powder bonke benza ngokukhubaza i-enzyme ye-PDE5, kodwa ezi zi yobisi zivimbela i-PDE enzyme i-6, i-1 ne-11 ngee-degree. Ngokomzekelo, iSildenafil kunye ne-vardenafil inqanda i-PDE6, i-enzyme efumaneka kwiso, ngaphezu kwe-tadalafil. Abanye abasebenzisi be-sildenafil babona i-tinge bluish kwaye banokuvakalelwa okukhulu ekukhanyeni ngenxa ye-PDE6 inhibition. Ngaphandle koko, u-Sildenafil kunye ne-vardenafil banqanda i-PDE1 ngaphezu kwe-tadalafil. I-PDE1 ifumaneka kwingqondo, entliziyweni, kunye ne-muscular smooth muscle. Kucingelwa ukuba ukuvinjelwa kwe-PDE1 ngu-sildenafil kunye ne-vardenafil kukukhokelela ekutheni i-vasodilation, i-flushing, ne-tachycardia.
I-1.Iziko leSizwe kwi-Biotechnology Information, e-US. ILayibrari kaZwelonke yamayeza, iTadalafil, iPaschem Iziqendu 1-10.
2.Evelyn C. Cortez, CIALIS (Tadalafil): Ukusetyenziswa, Isisombululo, Iimpawu zecala leNkcukacha kunye naphi ukuthenga i-Generic Cialis (iTadalafil), iViagra (iSildenafil) kunye nezinye izidakamizwa ezigqithisileyo kwaye zikhuselekile kwi-intanethi, zipapashwe, 13 Dec 2017, iphepha 5-3
3.James Lee Anderson, Cialis, Tadalafil: Uphatha i-Erectile Dysfunction, Izibonakaliso ze-Benign Prostatic Hyperplasia, kunye ne-Pulmonary Arterial Hypertension, i-CreateSpace Independent Publishing Platform, i-26 Mar 2015, iphepha 5-47.
I-Dapoxetine yamaqabunga e-HCL powder (129938-20-1)
I-Raw Dapoxetine i-Hydrochloride powder, i-anti-depressant entsha, ifumanekile ukuba ikhuselekile kwaye isebenza kakuhle kunyango ......
Amandla: 1476kg / inyanga